နှလုံးသား ဒိုင်ယာရီ: အပြောင်းအလဲ
ပေါက်လွှတ်ပဲစား ဆန်လွန်းတဲ့ အတွေးတွေ
ပေါ့ပျက်ပျက် နိုင်လွန်းတဲ့ အတွေးတွေ
ခေတ်ပြောင်း စနစ်ပြောင်း အသွင်ပြောင်းမှာ
အတွေးတွေလဲ ပြောင်းပစ်ကြဖို့လိုပြီလေ ။
Posted by မိုးနတ်ကြယ်စင် at 7:24 AM
ရင်ခုန်ရသူ(ကဗျာ၊အချစ်၊ဟာသ၊အလွမ်း) January 20, 2013 at 8:16 AM
ညီလင်းနိူင် January 20, 2013 at 9:57 AM
ရိုးရိုးသားသား ခံစားမိပါတယ် ။
ဆက်လက်ထုဆစ်နိူင်ပါစေ ညီမလေး ။
Sweety Snow January 20, 2013 at 10:07 AM
ကဗျာကောင်းလေး အားပေးသွားတယ် မိုးနတ်ရေ အိုင်ဒီယာလေးကောင်းတယ်
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) January 20, 2013 at 10:08 AM
နှစ်သစ်နဲ့အတူ အားလုံး ပြောင်းလဲပစ်မဲ့ ပုံစံပါလား။ သူ့ကဗျာဖတ်ရတာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲပစ်မှာလိမ့်ဆိုပြီး လန့်တောင် လန့်မိသေး။
စောင့်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ဘာတွေ ပြောင်းမလဲဆိုတာ။း)
roseayemaung January 20, 2013 at 3:05 PM
ရိုးမြေကျ January 20, 2013 at 10:23 PM
ဟုတ်တယ်ညလေးမိုးနတ်ရေ။ ကိုယ်တိုင်ကလဲ အတွေးတွေပြောင်းလဲပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ ကဗျာလေးနဲ့ သတိပေးထားမှသတိရတော့တယ်ညလေးရေ။
မြဝတီဇော် January 20, 2013 at 10:24 PM
ညီမလေး မိုးနတ်ရေ...ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ တချို့သောအတွေးတွေကတော့ ဒီတစ်သက် ပြောင်းမှ ပြောင်းနိုင်ကြပါတော့မလား မသိ။ ဆိုလိုရင်းကို ထိထိမိမိ ရေးနိုင်တဲ့ မိုးနတ်ကိုတော့ လေးစားသွားပြီ။ အမြဲအားပေးနေတယ်နော်။ :)
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် January 21, 2013 at 4:51 AM
ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 21, 2013 at 6:24 AM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် January 21, 2013 at 9:12 PM
အတွေးရော အရေးရောကောင်းတယ် ညလေး ။
Candy January 21, 2013 at 9:15 PM
ကဗျာလေးက တိုတိုလေးနဲ့ မိုက်တယ် :D
အိပ်မက်ကောင်းကင် January 22, 2013 at 1:20 AM
မမမိုးနတ်ရေ မရောက်တာကြာလို့ အလည်လာရင်း ကဗျာလေးကိုခံစားသွားပါတယ် မှန်တယ် နှစ်သစ်တာရောက်လာတာ
မမမိုးနတ်လည်း စိတ်သစ်ကိုယ်သစ်နဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေနော်
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 22, 2013 at 3:56 AM
ကိုကို ကိုကိုမောင်ကြီးးးးးးးးးး အဆုံးထိစောင့်ကြည့်အုံးပေါ့ဟယ်...ဟွန်းးးးးးးး
သူများက နိုင်ငံရေးကို ရည်ညွှန်းပြီးရေးထားတာ သူကဘာတွေတလွဲတွေးနေဒယ်မသိ....:(
နှင်းဆီလေးရော ဂယ်ပဲအဲလိုထင်လား :)
PhyoPhyo January 22, 2013 at 9:48 AM
ဖတ်စရာစာတွေအများကြီးပဲ အစ်မလည်းမအားနိုင်လို့ ဘလောဂ့်တွေမလည်နိုင်တာ။
အစ်မ blog က ဝင်ရတာ ကြာတယ်ဆိုလို့ slider ဖြုတ်ထားလိုက်တယ်။ ညီမ အားလို့လာလည်ဖြစ်တဲ့အခါ စစ်ကြည့်ပါဦး။ ပြီးရင် ထူးမထူး အစ်မ မေးလ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် cbox မှာဖြစ်ဖြစ် ပြောခဲ့ပေးနော်။ ကြာတုန်းပဲ ဆိုရင် တခြား တစ်ခုစီထပ်စစ်ကြည့်ပေးမယ်။
kokoseinygn January 22, 2013 at 10:07 AM
ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ကြိုက်တယ်။
ရတုသစ် January 22, 2013 at 11:34 AM
အတွေးလေးကောင်းတယ် မိုးညရေ..။ မိုက်စ်
ချင်းမလေး January 22, 2013 at 10:57 PM
တိုတိုတုတ်တုတ်လေးနဲ့ အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးပါ..
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 23, 2013 at 8:07 AM
ဟားးးးးးးးးးး မမဇော်က ညလေးဆီလာမန့်တယ်...ပြီးတော့ အားရပါးရကို အားပေးတယ် .....
လူတိုင်းကို မန့်ခဲတဲ့ မမရေ...အာဘွားးးးးးးးးးးးးးးးးး
သယ်ရင်း အသဲလေးနဲ့ဖူးလေး အရမ်းသတိရတယ်ဟယ် :)
မမချောရေ... million thanks ပါနော် :P
ချစ်ကိုကြီး ( အကိုလွင်ပြင် ) ရေ...မတွေ့ရတာ ကြာပြီဟ :(
ကန်ကန်လေးရေ ( with love ) Mwaa Mwaa Mwaa :)
အိပ်မက်လေးရေ.... ကြိုးစားထား Fighting!!!!
ညီလင်းသစ် January 24, 2013 at 2:28 AM
ထိထိမိမိ ရှိလွန်းလှတဲ့ ကဗျာကောင်းလေး ဖတ်သွားပါတယ် ညီမမိုးနတ်ရေ...၊
အပြောင်းအလဲတစ်ခုမှာ အတွေးအခေါ်က စပြီး ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာ မျက်မှောက်ကာလရဲ့ လိုအပ်ချက်ပဲလို့ တွေးမိပါတယ်။
တတိယမြောက်သမီးတော် January 24, 2013 at 4:33 AM
အတွေးကောင်းလေး လာဖတ်သွားတယ် ညီမလေးရေ
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 24, 2013 at 5:45 AM
ကိုကိုစိန်ရေ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါနော်...:)
ကိုရတုရေ...မိုးနတ်နဲ့ မိုးညကို လူမှားနေတယ်နော်...အားကြီးချိတ်ချိုးတယ် တကယ်ကြီးးးးးးးးးးးးးးး
အကိုညီလင်းသစ်ရေ....မျက်မှောက်ကာလမှာ အပြောင်းအလဲတွေက ထင်သလောက်ကို
ရတုသစ် January 26, 2013 at 9:32 AM
မမှားပါဘူးဗျာ..လူမမှားပါဘူး စီဘောက်မှာ ရှင်းပြပြီးပြီလေဗျာ..ဟဲဟဲ
မိုးညချမ်း January 24, 2013 at 7:20 AM
အတွေးတွေ” ... ဟုတ်တယ် မမရေ ... ညလေးလည်း ပုံစံခွက်ထဲက အတွေးတွေထဲက လွတ်မြောက်ချင်နေပြီ ... :)
ငပိတွေ ထောင်းနေဦးမယ်း))
( အလကား စတာနော် )။
ကဗျာ ရေးသူ ကဗျာ ဖတ်သူတွေ များလာတာ အကိုတော့ သိပ်ကိုဝမ်းသာတယ်
ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မရေးနိုင်ဘူး သူများရေးတာကိုလိုက်ဖတ်ရမှာဘဲ များများသာရေး။
witch83 January 25, 2013 at 6:04 PM
အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ မလာဖြစ်တာ ကြာပြီ။ ဒီနေ့တော့ အလည်လာသွားပါတယ် sisလေးရေ။ ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းအတွက် မကောင်းတော့တဲ့၊ မသင့်တော့တဲ့ အတွေးတွေ ဖျောက်သင့်နေပါပြီလေ...း)
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 26, 2013 at 3:38 AM
လွတ်မြောက်ချင်ရင် ကြိုးစားပေါ့ မိုးညရယ်..ဒါပဲ ဘာခက်တာမှတ်လို့ :P
အယ် ...အကိုကပဲပြောရတယ်ရှိသေး..ညလေးတို့က အသစ်တွေပါ အဲလောက်လဲ
မတော်ပါဘူးးး မမြှောက်ပါနဲ့ အကိုရယ်...အကိုရေးထားတာတွေလဲ အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်:)))
ဟုတ်တယ်မရေ....အချိန်တွေဆွဲမနေစေချင်တော့ဘူး ၊ ဒါပေမဲ့ လူတွေက
အပြောင်းအလဲလုပ်တယ် ဆိုတာကို တလွဲတွေးနေကြတယ် ၊ ခေါင်းစဉ်ရော
အကြောင်းအရာပါ လွဲနေတယ်လို့ ညလေးတော့ ခံစားရတာပဲ :(((
မ ရောအဲလို မထင်မိဘူးလား :)))
မေမြို့မိုး January 28, 2013 at 4:58 AM
ကျွန်တော်တောင် ပြောင်းမှ ရမယ် လို့ ရေးထားသေးတယ်. အစ်မ. :)
Kaung Kin Ko January 29, 2013 at 4:54 AM
ကဗျာ လာဖတ်သွားတယ် ညီမလေး။
နှင်းနုလွင် January 29, 2013 at 5:29 AM
အခု ဖတ်ပြီးပြီးချင်းပဲ ပြောင်းတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပစ်လိုက်ပြီ။
မိုးသူ(တောင်ကြီး) January 30, 2013 at 7:55 PM
လိုင်းကမကောင်းတာနဲ့ blog ဖက်ကိုမရောက်လို့ 
မိတ်ဆွေ blogger တွေရဲ့ ပိုစ့်တွေ ကဗျာတွေကိုတောင်မဖတ်ရဘူး မိုးနတ်ရေ
အခုမှ အကြွေးကျန် ပိုစ့်တွေကိုလိုက်ဖတ်နေရတယ်
မိုးနတ်ကြယ်စင် February 1, 2013 at 5:48 AM
နွေမိုးရေးထားတာလေး အမ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်ဟယ် :D
အကိုကောင်းကင်ရေ ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် :)))
အို..ဒါဆိုသိပ်ကောင်းတာပေါ့ နှင်းနုရယ် :)
ရည်ဝေ March 6, 2013 at 8:33 PM
ချစ်သော စနိုးအတွက် မွေးနေ့အမှတ်တရ ကဗျာ ( ၃၁.၁.၂၀၁၃...
၂၀၁၂ ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်း ( Tag Post )